နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page2of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်လွန်းပြီး အဖတ်တွေလန်နေပြီလား…❗ ဆောင်းဝင်စပြုပြီး နည်းနည်းအေးလာတာနဲ့နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်ပြီး အဖတ်တွေလန်လာတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။ အအေးဒဏ်၊လေဒဏ်၊နေဒဏ်တွေကို ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက် နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့တာမျိုးတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့လွန်းပြီး အဖတ်လန်တာတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်….. 1) နှုတ်ခမ်းထိန်းသိမ်းအဆီအသုံးပြုပါ ♈ နှုတ်ခမ်းထိန်းသိမ်းအဆီဖြစ်တဲ့ Lip balm တွေကို အခုတော်တော်များများထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။…
ပန်းနာအထ ဆောင်းဝင်စ… ဆောင်းဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ နှာစေး၊ ထိပ်ခတ်နာတွေဖြစ်တာများလာသလို ပန်းနာအခံနဲ့ ကြပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းကျဥ်းမြောင်းပြီးတော့ အသက်ရှုကြပ်လာတတ်တဲ့ နာတာရှည် ရောဂါတစ်ခုပါ။ သေချာသာ ကုသမှုခံယူရင် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေပြေနေသွားနိုင်ပြီး ကုသမှုမခံယူပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့လူနေမှု ဘဝပါထိခိုက် လာနိုင်ပြီးအရေးပေါ်ခန်းဆိုတာ အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာ…….
ဆောင်းဝင်ခါစ အသားပတ်တာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ....
ဆောင်းဝင်ခါစ အသားပတ်တာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ…. ရာသီဥတုက ဆောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့ မနက်ခင်းစောစောတွေ၊ ညပိုင်းတွေကို အေးစပြုနေပါပြီ။ အသားခြောက်တာ အသားပတ်တာတွေများလာပြီး လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေမှာ အရေခွံကွာလာတာတွေပါဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်းဝင်ခါစ အသားပတ်တာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုရင်…. ပထမဆုံးအနေနဲ့က ရေပူနဲ့ရေချိုးတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။ အရမ်းချမ်းတယ်ဆိုပြီး လူတွေက ရေပူနဲ့ရေချိုးကြတာ၊ ရေနွေးနဲ့စပ်ပြီး…
ပွေးပေါက်လေ့ရှိသောနေရာများ ပွေးဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ အရေပြားယားနာရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကူးစက်တတ်တဲ့မှိုယားနာရောဂါတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအဖြစ်များတဲ့ ပွေးရောဂါဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မည်သည့်နေရာတွေမှာပေါက်လေ့ပေါက်ထရှိလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာပွေးပေါက်လေ့ရှိသလဲ??? ၁။ခြေထောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းလေးတွေကြားနဲ့ခြေထောက်မှာ အရေပြားအနာလေးတွေ၊အရေခွံကွာတာလေးတွေနဲ့ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေဖြစ်တတ်ပြီး အတော်ယားယံပါတယ်။ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ရာသီ၊ခြေထောက်များမကြာခဏစွတ်စိုခြင်းနဲ့ ခြေအိတ်ကြပ်ကြပ်ဝတ်တဲ့လူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ၂။ပေါင်ခြံကြားတွေဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်ယားနာအကွက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ လိင်အဂါၤမှာပါဖြစ်နိုင်ပြီး ကပ်ပယ်အိတ်မှာတော့သိပ်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။…